Filed under: စုံစီနဖာ, တက်ခ်ပိုစ် — 13 Comments	July 28, 2009
လူကလေးရဲ့ အိပ်ချိန်တန်ဗျိုင်းရှေ့ကပြန်လူကလေးရဲ့ အိပ်ချင်ဘူးဗျိုင်းရှေ့ကမြူး။
ညီမလေးရေ ထပါတော့ရောင်နီလာမှပေါ့။မောင်လေးရေ ထပါတော့ရောင်နီလာမှပေါ့။တကြော့နှစ်ကြော့တေးကိုသီငှက်ကြားနှုတ်ပလီ။
ရွှေလမှာ ယုန်ဝပ်လို့ဆန်ဖွတ်သည့် အဖိုးအိုဟောကြည့်ပါဆိုဆိုသာဆို ပိုမိုသည့်စကားကလေးအငိုတိတ်အောင်အရိပ်အရောင်ပြတယ်ဖိုးရွှေနတ်သား။
ရွှေစွန်ညို ဘာလိုလို့ဝဲပါတယ်။မထွေးလိုလို့ဝဲပါတယ်။မထွေးမပါ တို့ချည်းသာပါပါလျှက်သားနောက်ကထား။မထွေးအသားခါး လှတယ်။ချောင်းငယ်ရေနဲ့ ဆေးပါ့မယ်။ချောင်းငယ်ရ နွေမှာခမ်း။မြစ်ငယ်ရေနဲ့ ဆေးပါ့မယ်။မြစ်ငယ်ရေ နွေမှာခမ်း။ပင်လယ်ရေနဲ့ ဆေးပါမယ်။ပင်လယ်ရေ ဘယ်မှာခမ်း။မထွေးအမိဖမ်း။(မှားနေရင်ခွင့်လွှတ်နော်။သူများတွေဆော့တာ ကြားရသမျှ၊မှတ်မိသမျှရေးတာ။)
ဘီးဘီး ဘာဘီးလဲ။ရွှေဘီး။ရွှေစော်နံ ပြန်လိုက်ဦး။ဘီးဘီး ဘာဘီးလဲ။ငွေဘီး။ငွေစော်နံ ပြန်လိုက်ဦး။ဘီးဘီး ဘာဘီးလဲ။ကြေးဘီး။ကြေးစော်နံ ပြန်လိုက်ဦး။(နောက်ပိုင်းတွေ မမှတ်မိတော့ပါ။)ဒီလို ကဗျာလေးတွေကို ကလေးများအပြန်အလှန် ရွတ်ဆိုကြရင်း အုပ်စုလိုက် ကစားကြတာကို တွေးရင်းငယ်စဉ်တောင်ကျေး ပျော်ပါးကစားခဲ့ကြ ပုံများကိုလည်း လွမ်းမိပါသေးတယ်။ရန်ဖြစ်ကြ ပြန်ချစ်ကြရင်းနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး မာနကင်း အာဂတကင်း၊ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ဘာစိတ်မျှမရှိကြပဲ ပကတိ ရိုးသားသော ကလေးငယ်ဘဝပေတည်း။
ညအခါ လသာသာကစားမလား နားမလား။က..ကလေးငယ် ချစ်စဖွယ်ခ…ခရေကုန်း မလေးပြုံး။ဂငယ်… ဂဏန်းသင်ပြုံးရွှင်ရွှင်။င…. ငချိတ်ပေါင်းစားလို့ကောင်း။စ…………ဆ………အ အမေတို့တိုင်းပြေ ငါတို့ချစ်တဲ့မြေ။
ရဲသားကြီးကိုလှဖေလူဆိုးဖမ်းဖို့ တာဝန်ကြေ။မလှမွန် သူနာပြု စေတနာနဲ့ သူပြုစု။
ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည်။ဖူးတံဝင်လို့ချီ။နေခြည်မှာ ရွှေရည်လောင်းငါတို့ စာသင်ကျောင်း။ဒီကဗျာလေးကတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အခုထိတောင် ဆိုလို့ကောင်းနေဆဲပါဗျာ။
တံတာဦးက ကွမ်းနုဝါငမျာကဆေး…..။ကွမ်းသီးတောင်ငူနှင့်၊ကိုင်း ထုံးဖြူ ၊ ပြည် ရှားသာဝါးလို့ထွေး။
ကွမ်းရွက်ကယ် ညှာကြွေရေစိမ်တဲ့ဆေး……။သန်းခေါက်လှိုင်လှိုင်နှင့်၊ချိုင်လိုက်မယ် ထုံးဖြူခြောက်ကယ်၊အာပေါက်မှထွေး။
စကားပြောတတ်ခါစအရွယ်မှစ၍ စာသင်သားကျောင်းသားဘဝ၊ အတန်းတွေကြီးလာသည့်အထိ ကျွန်တော်တိုရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းကောင်း၊သင်ကြားခဲ့ရသော ကျောင်းစာများတွင်လည်းကောင်း ကဗျာသည် အတော်အတန်ပင် ထိတွေ့ခဲ့ရသည့် ကစားမှုအနေဖြင့်ရော၊ ပညာဗဟုသုတများအနေဖြင့်ရောပေးသောစာပေဖြစ်ပေသည်။လူကြီးတွေဆိုသလိုပေါ့ ဂါထာပေး တေးဖြစ်တဲ့၊ ကဗျာပေးရင်ကော တေးဖြစ်မှာပဲလေ။ ကဗျာဆိုတာကတော့ တေးသီချင်းအစပဲပေါ့ဗျာ။ တေးတောင် သီဆိုမှုကောင်းလျှင် နားထောင်ကောင်းသလို ကဗျာဆိုတာလည်း အသံနေ အသံထားနဲ့ရွတ်ဆိုတတ်လျှင် အတော်ပင်နားဝင်ချိုမြလှပေသည်။ရွတ်ကောင်းဆိုကောင်းသော အထက်ပါ ကဗျာလေးများသည် ကျွန်တော်အဖိုတော့ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘဝမှ အရွယ်ရောက်သည်တိုင် မမေ့နိုင်သည့် ကဗျာလေးများဖြစ်ပေသည်။တချို့ကဗျာလေးများမှာအမှားပါရင်လဲခွင့်လွှတ်ပြီးဖတ်ပေးကြပါခင်ဗျား။ဒီအကြောင်းတက်ခ်ထားတဲ့မနှင်းကိုရောစိတ်ကျေနပ်မည်လို့ထင်ပါတယ်။လာအကြောင်းကြားလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။ပထမဆုံးဈေးဦးပေါက်သော ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကဗျာတွေဖတ်ရတာ သဘောကျတဲ့သူအဖြစ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပါစွာရေးသားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
13 Comments: zizawa
July 28, 2009 at 5:48 am	>ကိုချမ်းလင်းနေကလိမ္မာတယ်ထင်တယ်။ ဗန္ဓုလမခံဘူးကွရန်သူလာရင် ရှေ့ကိုတိုးအမြဲတမ်းထိုင်ရှိခိုး တို့လိုကဗျာတွေ မဆိုဘူးထင်တယ် :o)
July 28, 2009 at 11:34 am	>ဟီးးးးးး ဘယ်ကဗျာလေးတွေမှ သိပ်မမှတ်မိလို့ပါ။
July 28, 2009 at 11:43 am	>ကိုနေလင်းရေလာဖတ်သွားပြီနော်…ကိုနေလင်းရွတ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို သိသွားပြီ…ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်….
July 28, 2009 at 2:08 pm	>ကိုချမ်း က ဒီလိုကဗျာတွေပဲ ရွတ်ခဲ့တာလား။ လိမ္မာလိုက်တာ။😛 မငုံတို့တော့ ပေါက်တတ်ကရအော်ခဲ့တာလေး ဖော်ကောင်လုပ်နေတယ်။ ကိုချမ်းရေးမှပဲ ငယ်က ကဗျာကောင်းလေးတွေကို လွမ်းသွားတော့တယ်။
July 28, 2009 at 2:11 pm	>ပေါက်ကရအော်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေတော့ရှိတယ်။အားလုံးမေ့ကုန်ပြီ။
July 28, 2009 at 5:52 pm	>ကိုချမ်းရေ… ငယ်ငယ်က ကဗျာလေးတွေ ပြန်လာဖတ်တယ်။။ ဟိဟိတစ်ခုမှ မမှတ်မိတော့ဘူး။ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာရွတ်ခဲ့တာတွေ ပြန်သတိရတယ်။
July 28, 2009 at 8:25 pm	>ကားဆရာ ကိုလှသောင်းအရက်မူးပြီး အရမ်းမောင်း….အဆိုတော် ကိုကော်ပီသံစဉ်ခိုးပြီး သူဆိုသည်သူ့အခ္ဂေ သူများကူးသူကျေနပ်ပါဘူး….ဟူး..အသစ်တ္ဂေလေ….(နာမည်တူရင်ခ္ဂင့်လွှတ်ပါ..မည်သူ့ကိုမျှမရည်၇္ဂယ်ပါ..)
July 28, 2009 at 9:26 pm	>အခု ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်ဖတ်နေတာ ကိုချမ်းလင်းနေ ငယ်ငယ်က ကဗျာတွေက မြင့်လှချည်လား…း)
July 29, 2009 at 2:11 am	>မင်္ဂလာပါ။ စာလာဖတ်သွားပါတယ်။ ရွှေစွန်ညိုမှာ ချောင်းငယ်ရေနဲ့ အရင်ဆေးပါတယ်၊ ပြီးတော့ မြစ်ငယ်ရေ နောက်ဆုံးမှ ပင်လယ်ရေနဲ့ ဆေးပါတယ်။ ချောင်းငယ်ရေနဲ့ မြစ်ငယ်ရေက နွေမှာ ခမ်းပေမယ့် ပင်လယ်ရေက ဘယ်တော့မှ မခမ်းတဲ့အတွက် အဲဒါနဲ့ အဆုံသတ်တာ ဖြစ်တယ်။
July 29, 2009 at 11:40 am	>အဲဒုတိယ မနင်းဗျ။ အဟီး။သူရေးတာနဲ့တင် ကုန်ရော။ ဘာမှကို မကျန်တော့ဘူး။ နောက်မှာ ငဇော်တစ်ယောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားမပေးကြဘူးဗျာ။ ဟင့်။ =(
July 29, 2009 at 2:27 pm	>ရေးသွားလိုက်တဲ. ကဗျာတွေဗျာစုံစေ.နေတာဘဲဗျာ ကျောင်တုန်းကကဗျာတွေ လည်းကုန်ပါပြီ :Pမနှင်းကြီး တဂ်ထားတာ ညီကရေးစရာကိုမကျန်တော.ဘူးဗျာ😦
July 29, 2009 at 10:34 pm	>ငယ်ငယ်တုန်းက ဘ၀ကို ပြန်သတိရလိုက်တာ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အုပ်စုလိုက် ရွှေစွန်ညိုလုပ်တမ်းကစားတာတွေ မှတ်မိသွားတယ်။ ကိုချမ်းရေးတဲ့ ကဗျာတွေက ငယ်ဘ၀ကို တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ။ နောက်လည်း စာတွေ လာပြီး အားပေးဖတ်ပါ့မယ်။ ခင်လျက်
July 31, 2009 at 2:46 am	>ဟီးးးး ပြောမယ် စိတ်မဆိုးနဲ့ ရဲသားကြီးက ကိုလှဖေ လူဆိုးရိုက်လို့သေ ဟားးးဟားးး ငယ်ငယ်က ဆိုခဲ့တာလေ မှတ်မိသေးတယ် စိတ်မဆိုးဘူးနော် အခုလိုပြောတာ ဟီးးး ခင်လို့ စ သွားတယ်နော် ဘိုင် လာလည်တာ ကျေးဇူးနော် တာ့တာ